Ugwadule i-Atacama, indawo eyoma kakhulu emhlabeni | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Iplanethi esiphila kuyo yizwe lapho kuhlala khona kokubili ukweqisa naphakathi, ihlane le-Atacama liyindawo lapho izilwane nezitshalo kunezinkinga eziningi zokuza phambili.
Yisifunda esome kakhulu esikhona, kodwa kungani?
1 Imephu ye-Atacama Likuphi Ugwadule i-Atacama?
3 Sinjani isimo sezulu ogwadule olomile emhlabeni?
4 Ugwadule lwase-Atacama nomuntu
4.1 Isayensi yezinkanyezi
5 Izimbali nezilwane ezijwayele lesi sifunda
6 Izimbali Zase-Atacama Desert
Imephu ye-Atacama Likuphi Ugwadule i-Atacama?
Isithombe - Researchgate.net
Ugwadule i-Atacama ugwadule olungelona olusePoland oluseNingizimu Melika okwamanje olumumatha indawo ecishe ibe yi-105.000km2, enobude obucishe bube yi-1600km nobubanzi obukhulu be-180km. Kuklanywe ulwandlekazi iPacific ngasentshonalanga kanye nohla lwezintaba i-Andes empumalanga.
NgeyaseChile, futhi inemingcele neBolivia ne-Argentina. Emngceleni ohlukaniswe naleli zwe lokugcina laseNingizimu Melika, yintaba-mlilo iSocompa, ebheke ku-5250 a. C. kwaqubuka indawo engamakhilomitha ayi-600km2 ngemfucumfucu (amadwala enzelwe). Ungabona okuningi mayelana nendawo yayo ebalazweni
Ukube bekungeyona eye I-Humboldt yamanje, impela bekungaba yilokho okwakuyikho eminyakeni eyizigidi ezintathu edlule: olwandle. Futhi ukuthi lo msinga wamanje, ngokuhambisa amanzi abandayo usuka e-Antarctica uye ogwini lwaseChile nasePeruvia, wenza ukuthi umoya opholile wasolwandle uphole, wehlise ukuhwamuka futhi ngaleyo ndlela ugweme ukwakheka kwamafu emvula..
Enye into ebambe iqhaza ekuqhubekeni phambili kogwadule kule ngxenye yomhlaba umphumela weFoehn, isimo sezulu esibangela ukuthi amafu akhiphe imvula emithambekeni yezintaba, kulokhu, Izintaba ze-Andes, ukuze kuthi, uma zidlula kuzo, zingabi namanzi, okwenza ugwadule.
Ngakolunye uhlangothi, enyakatho yezintaba i-Andes kwakhiwa i-Altiplano, okuyithafa eliphakeme nelibanzi lentaba-mlilo. Ngenkathi ngaseningizimu ithwebula umswakama ovela oLwandlekazi iPacific, enyakatho ivimbela iziphepho ezivela esifundeni sase-Amazon ukuthi zingene eChile.
Sinjani isimo sezulu ogwadule olomile emhlabeni?
Uma ucabanga ukuthi ihlobo laseMedithera belinzima ukubekezelela, Cabanga nje ukuthi bekungaba njani ukuhlala endaweni lapho ebusuku yehle iye ku -25ºC kuthi emini ikhuphuke ibe ngu-50ºC.. the ubukhulu bokushisa Kuphakeme kakhulu ukuthi bambalwa kakhulu abanesibindi abazama ukuhamba, futhi bambalwa kakhulu abenze leli hlane ikhaya labo.
Mayelana nemvula, imvula elinganisekayo, okungukuthi, u-1mm noma ngaphezulu, ingawa kanye njalo eminyakeni eyi-15 kuye kwengama-40. Kungathatha amakhulu eminyaka ukuthi lina kakhulu. Kepha, yize lina kancane kakhulu, phakathi nenyanga kaJanuwari noFebruwari kuneziphepho eziningi zikagesi.
Umswakama ohambisanayo womoya ungama-18% ngaphakathi, kepha ungafinyelela kuma-98% ogwini phakathi nezinyanga zasebusika, ukuze ukuzwa okushisayo kungaba ukungakhululeki kakhulu. Futhi hhayi lokho kuphela, kepha uma ulinga ukuhamba, kufanele uzivikele emisebeni ye-ultraviolet, ngoba imisebe iphezulu kakhulu.
Ugwadule lwase-Atacama nomuntu
Ngaphandle kwezimo zezulu ezinzima, selokhu kwaqala ukoloni lwaseMelika, abantu bayisebenzise ngandlela thile. Eminyakeni eyi-12.000 eyedlule ikoloni lalisebenza emayini ye-iron oxide eTaltal, esifundeni sase-Antofagasta. Eminyakeni eyalandela, cishe ngo-5000 BC, ama-chinchorros aqala ukugwinya abafileyo babo. Futhi impucuko ye-Inca yathuthukiswa lapha.
Namuhla, yindawo ekahle yesintu ukuthi ifunde kabanzi nge-astronomy futhi ijabulele ezemidlalo ezingekho emgwaqeni.
Uma ufuna ukubuka izinkanyezi, kufanele uye endaweni ekude kakhulu nasenkabeni yedolobha, ngaphandle kwalokho ukungcoliswa kokukhanya ngeke kukuvumele ubone okuningi. Kuyiqiniso ukuthi kukhona izibonakude ongabona ngazo izinto eziningi nasemadolobheni, kepha kuzohlala kungcono ukuhlala kude nokukhanya okwenziwe ngabantu.
Ehlane lase-Atacama le nkinga ayikho. Akukhona nje ukuthi akukho ukungcola okuncane, kepha isembozo samafu esiphansi nokuphakama ngaphezu kwezinga lolwandle kwenza isithombe sibonakale ngethubhu ebonakalayo ye-telescope ebukhali kakhulu. Ngokwalesi sizathu, kunezibukeli ezingaphezu kweshumi nambili ezitholakale lapha, njenge-ALMA, okuyiphrojekthi yezinkanyezi enkulu kunazo zonke emhlabeni.
Uyayithanda i-rally? Uma kunjalo, kungenzeka ukuthi ubonile eminye yemiqhudelwano ebanjelwa e-Atacama, njengeBaja Atacama Rally, iPatagonia Atacama Rally, noma iDakar Series Rally. Indawo enaleli hlane iyona efaneleke kakhulu kulo mdlalo.
Izimbali nezilwane ezijwayele lesi sifunda
Isithombe - Phil Bendle
Yize kunzima ukukholelwa, kunezinhlobo eziningi zezitshalo ezikwazi ukuzivumelanisa nezimo, ezinjengalezi ezilandelayo:
ICopiapoa: luhlobo lwe-cacti olunomumo we-globose olinganisa u-10-15cm ovikelwe ngezinsipho ezimnyama ezikhiqiza izimbali ezimhlophe eziphuzi. Ngokuya ngohlobo, ingakhiqiza amaswidi.
ISenecio myriophyllus: yisihlahlana esikwazi ukufika ku-50cm ngezimbali eziphuzi ezifana nama-daisy ngobubanzi obungu-2cm.
URicinus communis: yi-shrub enamaqabunga esundu anombala oluhlaza noma obomvu ngokuya ngokuhlukahluka, okufinyelela ku-2-3m ukuphakama.
Kunezilwane eziguquke oGwadule lwe-Atacama, ezinjengalezi ezilandelayo:
UPelecanus: ivuba yinyoni yasemanzini enomlomo omude odla izinhlanzi.
I-Vicugna vicugna: i-vicuña ikamela lama-Andes. Inesisindo esifinyelela ku-55kg uma isikhulile, futhi idla utshani.
UPhilodryas chamissonis: inyoka enomsila omude yinyoka ekwazi ukukala ize ifinyelele ku-140cm ubude. Idla amagundane nezinambuzane ezincane.
Izimbali Zase-Atacama Desert
Kubukeka kungakholeki ukuthi endaweni eyomile kangaka kungaba yisigcawu somunye wemibukwane emangalisa kakhulu yemvelo. Uma lina, noma ngabe kuncane kangakanani, izitshalo zikhula ngokushesha futhi zikhiqize izimbali eziningi kangangokuba zimboza ugwadule ngokuphila. Futhi uma ungangikholwa, nazi izithombe namavidiyo ambalwa. Zijabulele.
Isithombe - Higherperspective-img.rbl.ms
Isithombe - Explore-Atacama.com
Ugwadule i-Atacama lungenye yezindawo ezimangalisa kakhulu emhlabeni, awucabangi?
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo Sezulu Senethiwekhi » Ugwadule lwe-Atacama, indawo eyoma kakhulu emhlabeni